2014/Myanmar/Yangon/Fedora Project - Myanmar Community - Software Freedom Day Wiki
Fedora Project - Myanmar Community
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပြုလုပ်သော စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ကျရောက်တဲ့ Software Freedom Day မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Fedora Project – Myanmar Community အနေနဲ့ အောက်ပါအစီအစဉ်များ အတိုင်း ပူးပေါင်းပါဝင် ပြုလုပ်သွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ကတော့ နေ့လည် ၂ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီထိ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာကတော့ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားလမ်းနှင့် အနော်ရထားလမ်း လမ်းဆုံရှိ Orchid Hotel Yangon Myanmar ရှိ ခန်းမ တွင် ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နေ့လည် ၂ နာရီမှ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်အထိ ဧည့်သည်များ နေရာယူခြင်း
၂ နာရီ ၁၅ မှ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ် အထိတော့ Fedora Project – Myanmar Community ၏ Leader ရန်နိုင်မြင့် မှ SFD Day အဖွင့် နှင့် ၄င်း နှင့် ပက်သတ်သည်များကို ပြောကြားခြင်း
၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှ မှ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ် အထိမှာတော့ ကို လွင်မောင်မောင် မှ OpenSUSE မိတ်ဆက်နှင့် ၄င်း Linux Distro နှင့် ပက်သတ်သည်များကို ပြောကြားခြင်း
၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ် ထိမှာတော့ Fedora Project – Myanmar Community မှ Core Member သုတအောင်မှ CentOS7မိတ်ဆက်နှင့် ၄င်း အကြောင်း အကျဉ်း
၃ နာရီ ၄၅ မိနစ် မှ ၄ နာရီထိမှာတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆွေးနွေးမိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် အစီအစဉ် ရပ်နားခြင်း
Software Freedom Day သို့ လာရောက်ကြသူများ အနေနဲ့တော့ Fedora Linux ၏ Booth နှင့် OpenSUSE ၏ Booth များတွင် အခမဲ့ပေးဝေမည်ဖြစ်သော Installer Bootable DVD များအပြင် Software Freedom Day အထိန်းအမှတ်အဖြစ် အခမဲ့ ဝေငှသော FreeBSD 10 & GhostBSD 3.5 တို့ကိုလည်း အခမဲ့ ကူးယူနိုင် ပြီး အမှတ်တရသက်ဆိုင်ရာ Distro များ၏ Sticker များကိုလည်း ရယူနိုင်မှာပါ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်တက်ရောက်လိုသူများကတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နေရာ၊အစားအသောက် နှင့်အခြားလိုအပ်သော စီစဉ်စရာများအတွက်ဲကြိုတင်စီစဉ်နိုင်အောင် ကျေးဇူးပြုပြီး https://sfdygn2014.doattend.com မှာ Registration ပြုလုပ်ပေးစေလိုပါတယ်။
ယခုလို အခြား Distro Fan များမှ Software Freedom Day တွင် ပါဝင်အားဖြည့်ပေးခဲ့ခြင်းအတွက်လည်း ပွဲမတိုင်ခင် Fedora Project – Myanmar Community အနေနှင့် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောကြားအပ်ပါတယ်။
We, Fedora Project - Myanmar Community will celebreate Software Freedom Day which is on September 20, 2014, by the followings.
- From 2:00 PM to 2:15 PM - The opening
- From 2:15 PM to 2:45 PM - About SFD and Introduction to Fedora Linux by Yan Naing Myint
- From 2:45 PM to 3:15 PM - About OpenSUSE
- From 3:15 PM to 3:45 PM - About CentOS7by Thuta Aung
- From 3:45 PM to 4:00 PM - Discussions, FAQ, Chats and The Closing
Additionally Fedora 20 (Heisenbug), OpenSUSE, FreeBSD 10, GhostBSD 3.5 Installer Medias together with their respective stickers and SFD 2014 Yangon Event Stickers will be given away.
Time is from2PM to4PM. Place will be in the VIP Rooms at "Tasty Village Resturant" (Sinmalite Market Basement).
Link on softwarefreedomday.org
Event Announcement on Official Fedora Project - Myanmar Community Website
Registration on DoAttend
Team Name: Fedora Project - Myanmar Community
[ Web Site ] [ Facebook Page ]
Leader: Yan Naing Myint (Orca-Krilozona)
[ Facebook ] [ Email: orcakrilozona at fedoraproject dot org ]